China kuvhura miganhu yayo mushure me85% yehuwandu hwevanhu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » China kuvhura miganhu yayo mushure me85% yehuwandu hwevanhu
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Gao Fu, mukuru weCentre for Disease Control and Prevention
Kana iyo nhomba yekudzivirira ikasvika kupfuura 85% kutanga kwa2022, pachave nehutachiona hushoma uye hapana neumwe weavo vane hutachiona angave ari mune chakakomba kana kufa.
China yehuwandu hwehuwandu hwevanhu hwekudzivirira hutachiwana hunogona kusvika kupfuura 85 muzana kutanga kwa2022.
Matanho aripo ekudzivirira chirwere muChina akakunda nguva yakawanda kuti agadzire mishonga yekudzivirira zvirwere inokwana uye inocheresa vanhu.
Iine 85% yekudzivirira mwero, kuwanda uye kufa kwehuwandu hweCOVID-19 kwaizonyanya kufanana neiyo furuu.
Zvinoenderana nemukuru wepamusoro kubva Chinese Center Yekudzivirira uye Kudzivirira Denda, China inogona kuvhura miganhu yayo kutanga kwa2022, kana ikabaya vanhu vanodarika 85% panguva iyoyo.
Iyo yazvino denda rekudzivirira matanho anopesana neCOVID-19 mu China wakunda nguva yakawanda yekugadzira majekiseni akakwana uye kuisa vanhu mishonga, Gao Fu, mukuru we Chirwere Chetachiona Chekudzivirira uye Kudzivirira, akadaro.
Kunze kwezvo, huturu hwecoronavirus huri kudzikirawo, sekureva kwaGao.
"Panguva iyoyo, sei tisingafaniri kutaura pachena?" mukuru akadaro.
Kana huwandu hwekupararira uye hwekufa kwe Covid-19 akafanana neaya furuwenza, uye zvinoita sekunge ichavapo pamwe nevanhu, kuyedza kubvisa hutachiona huchave hurefu hwehondo, akadaro.
"Kana zvakadaro, tinofanira kuramba tichidzivirira vanhu vazhinji, kugadzira majekiseni matsva, uye kunyanya kugadzira mishonga inoshanda."
Nike CFO nhengo itsva yeUnited Airlines Board of Directors
50 Embraer eVTOLs dzakaodha kuSydney matekisi matsva emhepo